के कारणले हुन्छ टन्सिल ? यस्ता छन् घरायसी उपचारहरू ! जान्नुहोस् —
के कारणले हुन्छ टन्सिल ? यस्ता छन् घरायसी उपचारहरू ! जान्नुहोस्
2019-12-04 2019-12-04 admin
हाम्रो जिब्रोको ठिक पछाडि बदाम आकारको दुई छोटो छोटो अङ्ग हुन्छ । जहाँ मुखबाट गलासम्म पुग्ने दुई यो अङ्ग हुन्छ जसलाई टन्सिल भनिन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउने कार्य गर्छन् । यसले शरीरको कयौँ बिरा’मी तथा सङ्क्र’मणबाट ब’चाउँछ । तर, कयौँ पटक यो शरीरलाई ब’चाउने को प्रक्रियामा स्वयं नै बिरामी हुन्छ । सङ्क्र’मण या कुन अन्य कारणबाट टन्सिलमा पी’डा हुन्छ । कयौँ पटक यो यति बढ्छ की खान पिउनसमेत स’मस्या हुन्छ ।
यदि वर्षमा एकपट टन्सिल हुन्छ भने त यो सामान्य सामस्या हो तर यसभन्दा धेरै भएमा यो खतरनाक हुन्छ । तर, टन्सिल भएको खण्डमा एन्टी बायोटिक लिनुको सट्टा केही घरेलु उपचार गर्न सक्नु हुन्छ । हर्वल चीया–टन्सिल हुँदा हर्वल चीया पिउदा पनि आराम मिल्छ । कागती या मह मिसाइएको चियाले पनि फाइदा पुग्छ । तुलसीवाला चिया पनि टन्सिलका लागि फाइदा हुन्छ । यसका लागि ५ पत्ता तुली, ५ वटा मरिच थोरै चुकअमिलो एक कप पानीमा उमालेर छानी खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
चिकेन सुप– चिकन सूपमा सोडियमको मात्रा धेरै हुन्छ । यो सू्रपमा कयौं पोषक तत्वपनि पाइन्छ । टन्सिल भए खाना खानसकिँदैन । जसका कारण शरीरमा भएको पोषक तत्वको कमीलाई चिकेन सुपले पूरा गर्छ ।
लसुन या ल्वाङ– टन्सिल भएको खण्डमा लसुन या ल्वाङ चुस्दा धेरै फाइदा हुन्छ । यसका अलावा उम्लिएको पानीमा ४–५ लसुन राखि उमाल्ने र छानेर यसले मुख कुला गर्ने जसले टन्सिललाई कम गर्न फाइदा पुग्छ ।
चूक अमिलो–चूक अमिलोमा पनि एन्टी ब्याक्टिरियल गुण हुन्छ । जो टन्सिलको समस्याबाट आरम दिनका लागि सहायक हुन्छ । भिनेगर आजकल बजारमा सहज रुपमा उपलव्ध हुन्छ । यसलाई पानीमा मिलाएर कुरा गर्न गर्न सक्नु हुन्छ । यो चिसो र फ्लूको भाइरससँग भिड्न पनि सक्षम हुन्छ ताथ यी विरामी हुनबाट जोगाउँछ ।
बेसार–कुला गर्नका लागि बेसार पनि राम्रो मानिन्छ । तातो पानीमा थोरै बेसार मिसाएर कुला गर्दा टन्सिल निको पार्न फाइदा हुन्छ । राति सुत्नु भन्दा पहिला एक गिलास तातो दूधमा थोरै बेसार र मरिच पाउडर पीउनाले राहत मिल्छ ।
पानीको प्रयोग– टन्सिलबाट आराम चाहिएको खण्डमा अत्याधिक पानी पिउनु जरुरी छ । सूप, जूूस तथा अन्य पेय पर्दाको प्रयोग बढी गर्नु आवश्यक छ। पानी पिउँदा गला चिसो रहन्छ । तर पेयपदार्थमा चिया, कफी या रक्सीलाई भने पूर्णरुपमा त्याग्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा महले पनि फाइदा पु–याउँछ ।
नुन पानी – नुनमा एन्टी बायोटिक गुण हुन्छ । यसका लागि हल्का तातो पानीमा नून हालेर मुख कुरा गर्नुहोस् यसबाट निकै लाभ हुन्छ । हरेक दिन मनतातो पानीमा नुन राखेर या नन अल्कोहलिक माउथवास राखेर मुख कुला गर्दा टन्सिलको समस्याबाट आराम मिल्छ । अझ नुनमा थोरै बेकिंग पाउडर राखेर कुला गर्दा थप फाइदा हुन्छ ।
आ’प्रवासी नीति’बाट खुसी छैनन् अष्ट्रेलिया’ली, सबै’भन्दा नि’रा’श पश्चिम अष्ट्रेलिया’का जनता
यसरी खोज्नुहोस् अस्ट्रेलियामा काम ! यी हुन् सहयोगी वेबसाइटहरू ! हेर्नुहोस्
2019-11-30 admin 0
ग्यास्ट्रिक भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ? ग्यास्ट्रिक हटाउने ९ उपायहरू यस्ता छन् ।
काठमाडौँ / अहिलेको समयमा ग्यास्ट्रिक नभको नेपाली पाउन हम्मे हम्मे छ । खानपानको समय नमिल्दा, अमिलो...
तपाइको प्रेसर हाई छ ? कस्तो चिज खाने कस्तो नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा ।
काठमाडौँ । अब खानै नपाउने अवस्थाका नेपाली कमै छन् । तर हाम्रो अस्व’स्थ जीवनशैली, आनीबानी र...
पेटको क्या’न्सरको सुरुवाती लक्षण कसरी थाहा पाउने?
२१ कार्तिक २०७६, काठमाडौँ । बद्लिँदो जीवनशैली तथा गलत खानपानका कारण शरीरमा विभिन्न किसिमका रो’गहरू उत्पन्न...